Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: dila ny rahona, mazava ny làlana, tsy mbola manga ny lanitra | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: dila ny rahona, mazava ny làlana, tsy mbola manga ny lanitra
Tsy misy intsony araky ny fijery azy ny sakantsakana mety hanembana ny fitantanan’ny Filoha vaovao Andry Rajoelina ahafahany manefa ny asa sy fombafomba mba ahatongavana eny amin’ny tanjona izay nampanantenainy. Asa aloha izay fitapitaka any ambadimbadika izay mety hifono fandrika miafina, fa rehefa nitso-drano andriamatoa Marc Ravalomanana ho an’ny fahombiazan’andriamatoa Andry Rajoelina eo amin’ny andraikitra manana ny hasiny manokana dia izay fehezin’izy ity amin’ny maha filoham-pirenena ny tenany dia naman’ny fanomezana antoka ho tsy fisian’ny korontana izany. Samy tokony ho tony avokoa ny ambanilanitra.
Mahatonga tsindry sy vesatra manokana ho an’ny fitondrana izany. Tsy misy ahafahana manilika ny anton’ny tsy fahombiazana amin’ny fanomezan-tsiny ny atsy na ny aroa, rehefa tonga ny fotoana hifampitsarana arakaraky ny vokatra tazana sy afaka lanjalanjaina. Na ao anatin’ny rivo-piainana tony aza anefa ny fiatombohan’ny fotoana fitantanany, tsy maintsy ranga ihany ny maso. Azo antoka fa tsy indray andro dia tapitra hiova toetra ny rehetra. Tsy vitan’
ny hoe saonjo iray lohasaha…fa noho ny fahazaran’ny tànan’olona maro nitsotra, sarotra ny hanantena fa tsy hisy ny fandinganana fetra sy ny fihoaram-pefy.
Tsy vahiny amin’izany, fa efa nisedra ny fitapitaka, fandrika isan-karazany fanaon’ny mpanohitra ity Filoha ity, ary efa niharan’ny fivadihan’ny mpiray dia taminy izay lasa fahavalony ankehitriny. Tsy izy no atoro fa saro-pady ny adidy sahaniny ka na tsy maintsy mipetraka aza ny fahatokisana an’ireo olona miara-miasa akaiky amin’ny tena dia tsy diso ny fahamalinana amin’ny fitaizana ahiahy tsy manam-pijanonana. Eo moa ilay vavaka fanaon’ny any ampita any, «arovy amin’ny mety ataon’ny namako aho, ny avy amin’ny fahavaloko, haiko ny miaro tena».
Noho izany rehetra izany, raha ny ankamaroan’ny mponina efa maika avokoa amin’ny fahatongavan’ny faha 19 janoary, andro handraisan’i Andry Rajoelina ny fahefana, azo heverina fa tsy mitsotsotra fotsiny ny tenany eo am-piandrasana an’izay fotoana izay. Efa mazana ny fifantenana an’ireo olona izay hiasa eo ankilany akaiky. Miankina amin’izay ny fahafahany manatanteraka ireo fampanantenana nomeny. Miainga avy amin’izany koa ny fahombiazan’ny fanentanana ny mponina izay ilana fiaraha-mientana amin’ny fanaovana ezaka sy mbola fiaretana indray ao anatin’ny fandeferana.